Ilhaan Cumar iyo Ninkeeda Ahmed Hirsi oo la Kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh -
Ilhaan Cumar iyo Ninkeeda Ahmed Hirsi oo la Kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh
Madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay kulana kula yeeshay Ilhan Cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo ka mid noqotay golaha wakiillada Xisbiga Dimoquraadiga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Photo Cali Dualle
Ilhan Cumar ayaa booqasho gaaban ku gaartay dalka Soomaaliya iyo waliba magaalo madaxda dalka ee Muqdisho. Ilhan oo uu wehlinayo odaygeeda, Axmed Xirsi ayaa soo booqday Villa Soomaaliya, si ay madaxweynaha dalka ula kulanto. Waxaa xarunta madaxtooyada ku soo dhoweeyey Ilhan Cumar agaasimaha hab-maamuuska madaxtooyada Soomaaliya, C/raxmaan Osmaan.
Kadib markii ay kulmeen, Madaxweynaha, ayaa uga mahadceliyey booqashada ay dalka ku timid, sidoo kale waxa uu ugu hambalyeeyey guulihii ay ka soo gaartay doorashooyinkii ay ka qeyb-gashay ugu dambeynna ay ku guuleystay Kursigii ay u tartameysay.
Sidoo kale Ilhaan Cumar, ayaa wax aad loogu farxo ku tilmaamtay kulanka ay madaxweyne Xasan Sheekh la yeelatay iyo sida loo soo dhoweeyey, waxa ay uga mahadceliyey dedaalka iyo guusha dowladda dalka gaarsiiyey ee ah in doorashooyin ay ka qabsoommaan, si gaar ahna haweenku loo siiyey qoondo 30%, taasina ay Soomaaliya uga horreyso dalal uu Mareykanku ka mid yahay.
Related Items:Featured, local, Somali immigrants, Somali Minneapolis
21 people have been charged in Minn. Chiropractic Insurance Fraud